Yakakwira Frequency Induction KuBrazil T Yakagadziriswa Copper Tubing Assemblies
Muedzo 1 - Kuisirwa brazing T-yakaumbwa yendarira tubing kusangana - 3 majoini panguva imwe chete
Muedzo wechipiri - Kuisirwa brazing tubing
Zvinhu: Mhangura machubhu 6, 8, 10, 12 mm (015/64, 05/16, 025⁄64, 01532inch. ); ukobvu: 1 mm (03/64 inch.)
Alloy: Cu-P-Ag mhete
ZANO: Iko kushandiswa kwezvindori zvearoyi kunokurudzirwa zvikuru neine ruoko rwakabata pfuti.
Bvunzo 1 (7-8kW)
Bvunzo 2 (6.5-9.2kW)
Coil: Regular induction heat coil. Maketi coil dhizaini inogoneka pane chikumbiro.
Isu takabudirira kuita zviviri kuburitsa kusungurudza bvunzo nemakereke akati wandei emhangura. Kutanga, Cu-P-Ag alloy zvindori zvakaiswa zvakapoterera mutete wemhangura machubhu. Hapana imwezve flux yaidikanwa. Mapaipi aya akabva anyatsoenderana. Iyo nzira ye induction brazing yakatangwa. Kamwe iyo kuburitsa kusungurudza yakanga yakazara, iwo maviri ma sampuli akaiswa mumvura inotonhora kuitira kuti anyorwe ipapo. Iyo yakawanda yakawandisa yeflux inogona kuenderera mberi kucheneswa.
Categories Technologies Tags brazing t ndarira, brazing thubhu, kuburitsa kusungurudza mhangura, induction brazing heater, induction brazing machine, induction brazing system, induction kuchenesa T, induction brazing T ndarira, T mapaipi emhangura achapenya, UHF kubheka, UHF ichipenya mhangura tubing Post navigation